Ziyini amathiphu we-SEO wakamuva okukhuphuka phezulu ku-Google?
Kukhona isethi enkulu sezinguquko nezibuyekezo ezithunyelwe yi-Google kuze kube manje kulo nyaka. Futhi zikhona izixuku ezinkulu zezingcebiso zakamuva ze-SEO zakwa-2017 ezitholakala ekuvulelekeni okuvulekile kuyo yonke indawo kuWebhu. Ngakho-ke, yiziphi izixazululo ezihlakaniphile okufanele uzikhethe phakathi kwalezi zinhlobonhlobo eziningi ezahlukene, izinkombandlela, nokusikisela? Khumbula, amasu amaningi wokusesha okwenzayo okwamanje, izinzuzo eziningi ozozibeka kuzo - buy driver's license passport. Masibe nokubukeza okufushane futhi sibone ukuthi yiziphi izitayela eziqhubekayo, ukuthi yiziphi zazo ezilahlekelwa yi-steam, futhi uma kukhona izinto zangaphambilini ezingasebenzi, noma ngaphezulu nakakhulu, zingase zibe yizinhlelo zokuphulwa komthetho okungenakwenzeka ngezijeziso ze-Google.
Namuhla, konke okuqukethwe kwezindaba zenhlalo kuthola okuvelele ngokwengeziwe ohlwini lwe-Google lamakhasi okuthola injini (SERPs). Ngokusho kophenyo lwakamuva, ochwepheshe embonini iphuzu lokuba nezixhumanisi ezifanele nekhwalithi ngamapulatifomu omphakathi ahamba phambili (njenge-Google +. YouTube, Facebook, Twitter, LinkedIn, njll. ) bazoqhubeka bezuza amandla abo, okungenani esikhathini esizayo esizayo.
Okuqukethwe kwevidiyo yekhwalithi
Akumangazi ukuthi okuqukethwe kwevidiyo manje kuyisixazululo esihle kakhulu sokubandakanyeka komphakathi okunamandla nokuhlangenwe nakho okungcono komsebenzisi. Okungaphezulu - lesi simiso manje sinengqondo kakhulu kunalokho esasetshenziswa ngo-2016. Manje, iningi lazo zonke izeluleko ze-SEO zakamuva zithole ukubhekisela kumavidiyo ngokugcwele okukwazi ukuthuthukisa ikhasi lakho jikelele elihlelwe. Futhi ezinye izibalo zimelele ukusikisela okumangalisa kakhulu, njengokusho kwemithombo ethandwa kakhulu embonini, kulinganiselwa ukuthi okuqukethwe kwevidiyo kunikezela manje ukukhushulwa kwesilinganiso sokungena kuka-40% (kuqhathaniswa nemibhalo yokuqala yansuku zonke).
Trend Trend Ukuthuthukisa
Nansi yezingcingo ezibaluleke kakhulu ze-SEO. Vele uzibuze ukuthi iwebhusayithi yakho yokuhweba iyinobungane yeselula. Ake sibhekane nakho - unesimo esinqunyiwe sesikhathi esitholakalayo kuze kube yilapho i-Mobile-First Index izobe isethelwe isenzo (i-Google isanda kuyifaka futhi ukuthi ifike ngo-2018). Ngakho, maduzane ukusebenza kahle mobile kuzoshintsha iqiniso, abe isimo evamile izindaba. Yingakho isikhathi esiphezulu ugijima ukuze uphinde ucabange futhi uthuthukise amasu akho wokuthuthukisa aqhutshwa ikakhulukazi ngokujwayelekile okusesidlangalaleni sokuseshwa kweselula.
Ukukhethwa kwezwi ngezwi
Kufana nomkhuba wamanje wokusebenza kahle kweselula, ukucinga ngezwi kubonakala kulandela ukulandela! Futhi ngokushesha maduze ukhetho lwezwi kulindeleke ukuthi lube yisimiso esisha, kunalokho okuhlukile. Ngaphandle kokuthi ukucinga ngezwi kubangele ukuthi kube nokuphepha kokushayela, ukuthuthukiswa kwalo okuthuthukisiwe kuye kwanikezelwa yizimboni ezinkulu, ngamunye wethula izinguqulo zabo siqu zokuhlaziya okusekelwe ngezwi (e. g. "Cortana" yi-Microsoft, i- "Google Now" yi-giant search giant, ne "Siri" ka-Apple).
Ama-Aggregation Okuqukethwe Okukhulu
Nansi isiphakamiso sami sokugcina. Phakathi kwamanye amathiphu we-SEO wakamuva, kunokuqonda okuhle kokuhlanganiswa kokuqukethwe, okuba manje okunamandla kakhulu futhi okungcono. Ngisho lapha ukuthi ukuhlanganiswa kokuqukethwe kuyindlela ewusizo yokwabelana ngobuningi bokuqukethwe okuchaziwe ngaphambilini kusuka enombolweni enkulu yemithombo ehlukile ukukhalela izilaleli ezibhekiswe kuzo. NgesiNgisi esicacile, esho isitoreji sokuphila esihlanganisa okuqukethwe kwemithombo yamandla aphezulu okuba nomphumela wokuqoqa ekusezingeni eliphakeme. Lokhu kungase kubonakale kungajwayelekile kithi, kodwa abanye abantu abahlakaniphile eMoz naseHubspot, ngokwesibonelo, bebeqhuba umsebenzi onjalo isikhathi eside (hlola ku-Inbound. i-org). Ngakho-ke, yisikhathi esiphezulu sokucabangela ukulandela lo mkhuba omusha wokuqukethwe bese uqala ukuqoqa nokuwususa kusuka eminye imithombo yesigungu esiphezulu esifanele kunendaba yakho.